Heshiisku Wuxuu Noo Keenay Waxba! – Rasaasa News
Heshiisku Wuxuu Noo Keenay Waxba!
Beelaha Somalida ee degan gabalka Ogaden, waxay aad uga xumaadeen heshiiskii nabadeed ee dhex maray dawlada federalka Itobiya iyo Jabhadaha ONLF iyo UWSLF. Waxayna dacwad u gudbiyeen dawlada federalka ah ee Itobiya iyaga oo leh “beesha Ogadeen haday maamulka joogto iyo hadii ay dibad joogtaba waa jabhad.”
Jabhadihii mudada 20-ka sano ah, dagaalka kula jiray dawlada Itobiya, oo ujeedadda dagaalkoodu ahaa in qoomiyada Somalida ee degan gabalka Ogaden ay helaan qaxooda.
waxay heshiis la galeen dawlada Itobiya, ka dib kolkii ay dawlada isku af garteen arimo badan.
Jabhadu intii ay dagaalka kula jirtay Itobiya, waxay raadinaysay xuquuqda dadka Somalida ah, nasiib daro waxaa lugta u qabanayey Itobiya dadka Somalida ah ee ay jabhadu xaqooda raadinaysay iyo maamul gabaleedyada ka jira dalka Somaliya.
Laga bilaabo sanadkii 1996, maamul gabaleedyada Somaliya iyo xukuumada Jabuuti waxay Itobiya u dhiibeen 322 ruux, oo ahaa dad shacab ah, balse ay sheegeen in ay ka tirsan yihiin jabhada ONLF, iyaga oo islahaa ugu dhawaada dawlada Itobiya.
Waxaa dhab ah, in gabalka Somalida ee loo yaqaan ‘Ogaden’, in marka laga hadlayo beelaha Somaliyeed ee degan gabalka ay ugu badan tahay beesha Ogaden ee wadata magaca gabalka.
Waxaa kale oo dhab ah in labadii jabhadood ee la dagaalamayey Itobiya ay ahaayeen beesha Ogaden, marka laga reebo dad yar oo ah beelaha kale.
Dagaaladii socday 20-ka sano, waxaa ay dhibaato aad u wayn ka soo gaadhay beesha Ogaden. Waxayna dawlada Itobiya u gaysatay xasuuq xoog leh oo markii dambe noqday caalami, waxaana guryahoodii ka barakacay kumanaan qaxooti ku ah dalalka dariska. Waxaa xiligan qorshe wada jira oo dib loogu soo celinayo dadka ka qaxay gabalka wada dawlada Itobiya, UNHCR iyo Jabhadihii heshiiska la galay dawlada.
Waxaa nasiib daro wayn ah, in beelaha Somaliyeed, ee hore uga soo horjeeday dagaaladii xuquuqdoonka qoomiyada Somalida, in maanta oo ay Jabhadihii nabad qaateen ay beelo diidaan.
Waxay dawladu dhawaan qaaday talaabooyinkii ugu horeeyey oo lagu muujinayo horumarinta gabalka; waxaana la sameeyey 15 degmo oo cusub, magaalooyin loo sameeyey maamul gaar ah, saddex madaxwene ku xigeen oo cusub iyo shaqaalayn xubno ka mid ah Jabhadihii nabada qaatay.
Arimahaas oo dan u ah guud ahaan qoomiyada Somalida, waxaa qaylo dhaan ka keenay beelo ka mid ah beelaha Somalida, kuwaas oo iyagu hore u haystay sad-bursi 20-kii sano ee dagaaladu ka socdeen degaanka Somalida.
Madaxweynaha degaanka Somalida ee xiligan, oo hore u ahaa hogaanka nabad galiyada, aadna ula dagaalamay Jabhadaha, waxaa uu hore u yidhi “ka yeeli mayno ONLF, in Iskuulka ku yaal gabalka shiniile ee ay dhigtaan caruurta ciise in ay ONLF, u bixiso ‘Ogaden’.”
Waxaa nasiib daro ah, in xiligan ay qaar ka mid ah caaqilada beesha ciise ku eedeeyaan madaxweynaha degaanka Somalida siyaasada guud ee dawlada Itobiya, magac beel.
Eedaas oo muujinaysa in nabad iyo colaad midna ayna qaar ka mid ah beelaha Somalidu, aragba Itobiya ee ay arkaan walaalkood Somaliyeed jecel yihiina in uusan jirin.
[mp3player width=200 height=20 config=fmp_jw_widget_config.xml file=http://rasaasa.com/oday.mp3]
Beesha Reer Ugaas Kooshin oo ka Gawshaysata in Birqod ay Raacdo Gabalka Jarar